Magacyada 39-ka Xildhibaan Ee U Codeeyey Talyanle, Dulucda Doonistiisa, Dabuubta Mudanayaasha iyo Dooodda Xoghayaha Wakiillada | Ogaalnews
Magacyada 39-ka Xildhibaan Ee U Codeeyey Talyanle, Dulucda Doonistiisa, Dabuubta Mudanayaasha iyo Dooodda Xoghayaha Wakiillada
Hargeysa, 08 August, 2017(Ogaal):- Khilaaf iyo Muran ayaa hadheeyey natiijada Shir-guddoonku ku dhawaaqay ee doorashadii Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo Axaddii ay ku tartameen Baashe Maxamed Faarax iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle, ka dib markii 39 Cod Guddoomiye Ku-xigeenka 2-aad Cali Yuusuf ku dhawaaqay inuu Baashe ku guulaystay, halka Talyanle-na uu sheegay inuu 38. Hase-yeeshee, Talyanle ayaa Habeen-hore goor-dambe sheegay inuu 39-ka Cod isagu helay oo Xildhibaannadii u Codeeyey joogaan oo uu isagu yahay Guddoomiyaha Wakiillada ee sharciga ah.
Haddaba, Xildhibaanno ka tirsan 39-kaas Mudane ee Talyanle sheegay inay u codeeyeen, ayaa shalay Warbaahinta kula hadlay Hargeysa, isla markaana mid waliba sheegay inuu Codkiisa siiyey Talyanle, markii codaynta ka dib ee Golaha laga baxayna xaqiiqsadeen in Codadka la is-weydaariyey oo 39 aanu lahayn Baashe loogu dhawaaqay arrintaasna aanay aqbali doonin, Dacwadna ay Maxkamadda uga gudbiyeen. Waxaanay Xildhibaannadaas Tobaneeyo ka tirsan oo hadlay, ku baaqeen in ciddii khalkaas iyo musuqaas masuuliyaddeeda yeelata in lagu qaado.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo Warbaahintu shalay wax ka weydiisay sababta ku kelliftay inuu saqbadhkii habeen-hore hadlo oo uu sheegto inuu yahay Guddoomiyaha la doortay, isagoo gelinkii hore ee Axaddiina hambalyeeyey Baashe Maxamed Faarax oo uu qiray inuu hal cod kaga guulaystay, waxa uu ku jawaabay; “Tirada markii la soo koobay Guddoomiyuhu wuxuu ku dhawaaqay in Talyanle 38 dooratay, Baashe-na 39 Cod, go’aankaasi wuxuu ahaa go’aan Guddoon, Shirku sidaas buu ku xidhmay, waan Tahniyadeeyey Ninkii ila baratamayey ee cod-dheerida halka igaga guulaystay. Sidii markaannu ku soo baxnay arrintu way is-beddeshay, Golaha dhexdiisa waxa ka dhacday in la yidhaahdo 39-ka Cod Adiga (Talyanle) adigaa lahaa, 38-kana Baashe, arrinta halla hubsado ayaa la yidhi, erayadaasi waxay ka yimaaddeen isla Golaha Wakiillada Shaqaalihiisii iyo Xoghaymihiisii (Xubno ka tirsan), deedna Xildhibaannadii ii codeeyey taa aad bay uga gilgisheen, waxay yidhaahdeen Shir Jaraa’id baynu qabanaynaa, markaa waxaan anigu is-idhi taa haku degdegin.”
Talyanle waxa uu sheegay 39-ka Xildhibaan ee u codeeyey ay shir saacado badan oo gelinkii dambe ee Axadda illaa habeen-hore ah socday kaga wadahadleen codkii ay bixiyeen, waxaanu yidhi; “Gelinkii dambe Shir baannu yeelannay 39-kii Xildhibaan ee ii codeeyey oo aan Nin ka maqnayn baa goob isugu yimi. 39-kaas Xildhibaan waxay qireen in mid waliba Codkiisii isiiyey. Arrintain mid Siyaasi ah maaha ee waa arrin Sharci, Maxkamadda ayaanay tegaysaa, oo wax ka odhanaysa.”
“Anigu haddaan markii hore tahniyadeeyey, iraadadii Xildhibaannada ayaa ka hor-timi, Xildhibaannadaas oo Xisbi qudha ahayn ee Xisbiyada oo dhan ah, oo Xildhibaanno aan Xisbina ku jirin ayaa ka mid ah, mid waliba markuu yidhi; ‘Xaqayagii la duudsiyi maayo’ taas ayaa igu dhalisay inaan ka daba-keeno. Xildhibaannadu waxay yidhaahdeen Codkayagu halkuu maray waa inuu ka muuqdo, markaa Anigu ma difaaci karo, Nahaayaddu Maxkamadda ayey tegaysaa, Dacwaddaasna saakaba (shalay) waa la gudbiyey.”
Talyanle oo la weydiiyey waxay kaga wadahadleen kulan uu la yeeshay Guddoomiyaha Guurtida Somaliland, waxa uu ku jawaabay; “Guddoomiyaha Guurtida waxaannu ka wadahadalnay mawduucan laftiisa, hadal Oday buu ahaa, sidaa su’aalaha aad ii weydiinaysaan ayuu ilahaa maxaa is-beddelay haddaad markii hore tahniyadaysay. Sidaa aan idiinka shaafiyey ayuun baan Isagana (Guddoomiyaha Guurtida) uga shaafiyey.”
Geesta kale, Xoghayaha guud ee Golaha Wakiillada Cabdirisaaq Siciid Ayaanle oo lagu eedaynayo inuu yahay Qofka tirada Codadka ay Baashe iyo Talyanle kala heleen is-dhaafiyey, ayaa ku dooday inaanay eedayntaasi waxba ka jirin, waxaanu yidhi; “Codka dorraad dhacay Talyaanle ayaa horreeyay, Guddoomiye Baashe wuxuu codsadayba inuu isagu horreeyo ee waxa la yidhi; ‘Talyanle Siifiiga ayuu horkeenay’, markaa tirintii Codka Talyanle ayaa la horraysiiyey oo wuxuu noqday 38 cod, meeshana 78 Mudane ayaa fadhiyay. Sidaas baan Cali Yuusuf ugu gudbiyay inay 38 tahay, waxa soo hadhayna 39 bay ahayd oo Baashe ayaa helay oo sidaa ayuu Baashe ku guulaysatay. Waxa eedda la sheegayo iyo waxaa laga hadlayna Anigu waxaan u arkaa Baroortu Orgiga ka wayn. Sharaftayda iyo karaamadayda sidaannu Xildhibaannada tooda u ilaalinno ee aannu ugu shaqayno ee aanu hadh iyo habeen ugu shaqayno waxaannu jecelnahay inay sharaftayadda iyo karaamadayda ilaaliyaan.”
Mar Cabdirisaaq Siciid Ayaanle, oo la weydiiyey inaanu Muuqaalku been sheegin, ee haddii 39-kaasi u codeeyeen Talyaanle ay ku caddaato inuu diyaar u yahay in Maxkamadaha Somaliland Dacwado lagaga furo oo uu ciqaabteeda aqbalayo, wuxuu ku jawaabay; “Kuwayagii Annagaa hayna haddii loo baahdo, tii uu Golaha Wakiilladu duubay, kuwan lala wareegayo waa kuwo cid gaar ahi sidatay oo been ka sheegaya maaha tii Golaha. Anigaaba Maxkamadda tegaya oo Sharaftayda iyo karaamadayda beenta intaa le’eeg laga sheegay, Anigaaba immika dhibbane ah oo Dacwad furanaya. Arrintaana waxba kama jiraan oo Guddoomiye waxa ah Baashe.”
39-ka xildhibaan ee hadlay iyo adiga oo ah Xoghayaha Golaha ah kee baa la aamminayaa? Su’aashaas oo la weydiiyey Cabdirisaaq Siciid Ayaanle, wuxuu kaga jawaabay; “Waxa la aaminayaa annigu waannu dhaaranay, waxna anaga ka masuul ah oo tirina. Tiradda ninkan baa horreeyay baan ku idhi oo 38 bay ahayd, haddii uu dambayn lahaa baa la isku qabsan lahaa, 39-ka aad sheegaysanna annigu ma arag aad leedahay xildhibaanno ayaa halka soo is-taagay. Laakiin tiradda aanu annigu samaynay sidaasay sax ku tahay.”
Magacyada 39-ka Xildhibaan ee Golaha Wakiillada Somaliland ka tirsan ee u Codeeyey Cabdiraxmaan Talyanle, ayaa lagu sheegay Kuwan hoos ku qoran, sida ku cad Liis Warbaahinta Internet-ka lagu baahiyey shalay illaa xalay, waxay u dhignaayeen sidan:-
“1-Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro)
2- Abubakar Cabdiraxmaan Good
3- Maxamed Cismaan Bulqaas
4- Siciid Cilmi Rooble
5- Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle
6- Maxamed Yuusuf Wabeeyo
7- Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac (Loyar)
8- Mahdi Xuseen Cadarre
9- Aadan Muxumed Horre
10- Siciid Warsame Ismaaciil (Gaane)
11- CabdiqadirJibriil Tukaale
12- Axmed Maxamed Nuur
13- Baar Siciid Faarax
14- Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde
15- Cabdiqaadir Jaamac Xaamuud
16- Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac (Aw-Xoog)
17- Cali Xaji Maxamed Muuse
18- Cali Sh. Ibraahim Aareye
19- Cabdi Hirad Warfaa
20- Xuseen Ismaaciil Yuusuf
21- Yuusuf Liibaan Cumar
22- Xasan Muuse Hufane
23- Maxamed Dhunkaale Guutaale
24- Saleebaan Yuusuf Cali Koore
25- Maxamed Saalax Cige
26- Cabdillaahi Axmed Yuusuf Madar
27- Xamuud Cismaan Cigaal
28- Baashir Xuseen Tukaale
29- Mahadi Cabdillaahi Maxamuud
30- Ibraahim Mahdi Buubaa
31- Xuseen Maxamed Cige
32- Axmed faarax Ghoege
33- Maxamed Farax Qabile
34- Wali Axmed Xaawa
35- Jaamac Xasan Aadan
36- Muuse Maxamed Ismaciil (Hoos-ujeed)
37- Naasir Xaaji Cali Shire
38- Xaashi Xuseen Caabi
39- Cabdiqadir Askar Xasan.”